Inotonhorera/Freezer Girazi Doors, Tempered Glass - Yuebang
Girazi Door Series
ZHEJIANG YUEBANG GLASS CO., LTD mugadziri ane makore anopfuura gumi nemashanu ane ruzivo uye akazvipira mukusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwemarudzi ese eInotonhorera/Freezer Glass Doors, Tempered Glass, Plastic Extrusion Profile uye marudzi ezvishandiso.
Nekupfuura 8000m2 nzvimbo yekudyara, vanopfuura zana+ vashandi vane hunyanzvi uye mutsara wakakura wekugadzira, unosanganisira Flat/Curved Tempered Machines, Glass Cutting Machines, Edgework polishing Machines, Drilling Machines, Notching Machines, Silk Printing Machines, Insulated Glass Machines, Extrusion Machines, etc., kugona kwedu kugadzira kunogona kusvika kupfuura 1000,000m2 girazi rinodziya, 250,000m2 insulated girazi uye 2000 matani epurasitiki extrusion mbiri pagore.
Girazi rakapfava rakapfava kana kuomeswa girazi imhando yegirazi rekuchengetedza rinogadziriswa neanodzorwa kupisa kana makemikari marapirwo kuti awedzere simba raro kana zvichienzaniswa negirazi rakajairwa. Kupisa kunoisa ...
Chinhu chausingazive nezve ...
Condensation Wanga uchiziva here kuti mafiriji emagonhi egirazi anoumba condensation (mvura) kunze kwegirazi munzvimbo dzine hunyoro hwakanyanya? Izvi hazvingope chimiro chakaipa, asi zvinogona kukonzera kuti mvura iumbe pa y...
Fekitori yedu yakapinda chiratidziro gore rino, takaratidza dhizaini yedu nyowani yefriji yegirazi gonhi, mushini wegirazi remusuwo, vatengi vazhinji vakauya kuimba yedu, vakaratidza kufarira kukuru ...
ZHEJIANG YUEBANG GLASS CO., LTD. yakatanga kuvakwa kwechirimwa chitsva, icho chinotarisirwa kupedzwa muna Zvita 2021. Chimiro chitsva chinofukidza nzvimbo ye15,000 square metres. inosanganisira maviri pasi ...